Ndị na-ebubata Kalịnda na mgbidi, kalenda Oche, Kalenda Tebụl, kalenda Oche ndị China
Nkọwa:Kalịnda mgbidi,Kalịnda Desk,Kalịnda Isiokwu,Kalịnda Ochie,Mpempe akwụkwọ Tebụl,Kalịnda Advent Kalinda
Akwukwo Akara Akwukwo
Kalịnda (Total 6 Products)
Ngwaahịa nke Kalịnda , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Kalịnda mgbidi , Kalịnda Desk suppliers / factory, wholesale high-quality products of Kalịnda Isiokwu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Chinesedị China na-ebi akwụkwọ na-ebi akwụkwọ mgbidi
N'ogbe kalịnda jikọtara ekwentị na teepu
Mbipụta mgbidi na-ebi okomoko
Kalịnda desktọọpụ ọhaneze nwere akwụkwọ mmado
Mbido mbuba ahia oge mbu 2018
Mbipụta akwụkwọ kalenda akwụkwọ adịghị ọnụ ala
Chinesedị China na-ebi akwụkwọ na-ebi akwụkwọ mgbidi Kalịnda Mgbidi bụ ụdị kalenda nke a ga-akwụnye n’elu mgbidi, enwere ike iji ya n’ọfịs / ezinụlọ. Mpempe akwụkwọ nke akwụkwọ ahụaja , mbipụta na- acha uhie uhie zuru oke, na-ejikọ waya. Mpempe...
N'ogbe kalịnda jikọtara ekwentị na teepu Dest Kalịnda bụ ụdị kalenda nke nwere ike ịnọ na njedebe, ọ bụ nnukwu ihe amaara n'ọfịs ọ bụla n'ihi na anyị nwere ike ịlele ụbọchị ahụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Mbipụta kalịnda juputara, ebipụta...
Mbipụta mgbidi na-ebi okomoko Kalịnda Mgbidi bụ ụdị kalenda nke a ga-akwụnye n’elu mgbidi, enwere ike iji ya n’ọfịs / ezinụlọ. Mpempe akwụkwọ nke akwụkwọ ahụaja , mbipụta na- acha uhie uhie zuru oke, na-ejikọ waya. Mpempe akwụkwọ nke Unitque...
Kalịnda desktọọpụ ọhaneze nwere akwụkwọ mmado Dest Kalịnda bụ ụdị kalenda nke nwere ike ịnọ na njedebe, ọ bụ nnukwu ihe amaara n'ọfịs ọ bụla n'ihi na anyị nwere ike ịlele ụbọchị ahụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Mbipụta ebipụta kalinda , mbipụta...
Mbido mbuba ahia oge mbu 2018 Kalịnda mbata bụ ụdị tebụl nke nwere ike ịlele ụbọchị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ logistic na-ebipụta kalenda dịka mgbasa ozi nye ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịbụ ndị ahịa n'ọdịnihu.Ma ụlọ ọrụ ndị ọzọ rịọrọ ka e bipụta kalenda 2018...
Mbipụta akwụkwọ Akwụkwọ Oche Ndị Eserese Ọzụmamama Kalinda bụ ụdị kalenda nke nwere ike ịlele ụbọchị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ arụmọrụ na-ebi akwụkwọ kalenda dị ka mgbasa ozi nye ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịbụ ndị ahịa n'ọdịnihu. Stlọ ọrụ ndị ọzọ na-arịọ maka...
Ndị ọzọ Ngwaahịa
Igbe mpempe akwụkwọ onyinye onyinye na rịbọn Kpọtụrụ ugbu a
Ndị na-emechi igbe na windo Kpọtụrụ ugbu a
Igbe eserese pink na eriri aka Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe Akwụkwọ Magnetik na Igwe Ọdụdọ Kpọtụrụ ugbu a
kaadiboodu uwe akpukpo ahihia eji etinye ya Kpọtụrụ ugbu a
Akwukwo onyinye onyinye kaadiboodu Kpọtụrụ ugbu a
igbe onyinye maka igbe kandụl nwere akara stamping Kpọtụrụ ugbu a
Akwụkwọ igbe onyinye mara mma Kpọtụrụ ugbu a
Igbe okpokoro okpokoro okpokoro okomoko Kpọtụrụ ugbu a
Efere igbe mgbasa ozi okomoko Kpọtụrụ ugbu a
Okomoko na agba ntụ agba okirikiri Kpọtụrụ ugbu a
Akwukwo onyinye nkuchianya nke ihu oji na ntupo UV Kpọtụrụ ugbu a
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Mpempe Ederede Mpempe Ederede nke Onyinye Kaadị Kpọtụrụ ugbu a
Igbukpo onyinye onyinye oriọna mmasi nke akpukpo onyinye Kpọtụrụ ugbu a
Edemede Igbe Mpempe Ekwentị na ụfụfụ Kpọtụrụ ugbu a
igbe okomoko akara ngosi akara ndi mmadu Kpọtụrụ ugbu a
China Kalịnda Ngwa
E guzobere Liyang Paper Products Co., Ltd. na 1999, ụlọ ọrụ ọkachamara agbakwunyere na R & D, andzụ ahịa na Nrụpụta.Liyang Printing na-enye usoro kachasị mma na ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ dị.Ema atụ, anyị nwere ike ịme akwụkwọ kalenda obibi akwụkwọ dị mma ma dị okomoko. dị ka kalenda na agba, kalịnda nla, kalịnda okomoko, wdg. kalenda anyị nke nwere ezigbo mma bụ akwụkwọ obibi akwụkwọ maka ngwaahịa gị.
Anyị na-agba mbọ ịnye usoro nkwakọ ngwaahịa iji nyere ndị ahịa aka ịbawanye ogo ahịa.
Ajụjụ ọ bụla na kalenda anyị, anabatakwa ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Igbe mpempe akwụkwọ onyinye onyinye na rịbọn
Igbe eserese pink na eriri aka
Mpempe Akwụkwọ Magnetik na Igwe Ọdụdọ
kaadiboodu uwe akpukpo ahihia eji etinye ya
igbe onyinye maka igbe kandụl nwere akara stamping
Efere igbe mgbasa ozi okomoko
Okomoko na agba ntụ agba okirikiri
Edemede Igbe Mpempe Ekwentị na ụfụfụ
Igbata kaadiboodu okpokoro onyinye igbe onyinye
Mbubata akwụkwọ ozi dị iche iche ahaziri iche
Akwụkwọ mara mma na mpempe akwụkwọ na-agba agba agba agba
igbe onyinye ọla plastik na ngwugwu akwụkwọ
Kalịnda mgbidi Kalịnda Desk Kalịnda Isiokwu Kalịnda Ochie Mpempe akwụkwọ Tebụl Kalịnda Advent Kalinda Kaadị igbe igbe kaadi Kaadị onyinye igbe kaadi